14 Iinkcukacha-manani zokuThethelela ukuThengisa uMxholo | Martech Zone
Iinkcukacha-manani ezi-14 zokuNgqinisisa ukuThengisa uMxholo
NgoMgqibelo, Septemba 28, 2013 NgeCawa, ngoSeptemba 29, 2013 Douglas Karr
Sihlala sisebenza nabantu abanengxaki yokuqonda izibonelelo zentengiso yomxholo. Basenokuba bathengisa kwimidiya yesiko okanye baqhuba ukuthengisa kunye neqela elimangalisayo eliphumayo. Ngelixa singekho nangayiphi na indlela ngokuchasene noko, utyalomali lwahluke kakhulu. Ngentengiso, abaphulaphuli bangabomnye umntu kwaye uhlawula ipremiyamu yokufikelela kubaphulaphuli. Awulogunya okanye umthombo othembekileyo, kunjalo. Kwaye ngokuthengisa okuphumayo, iindleko zakho zilingana nomthamo wentengiso ongayithanda. Ukuthengisa ngakumbi kufuna abantu abaninzi (okanye abantu ababizayo).
Ukuthengisa umxholo kufana kakhulu nolunye utyalo-mali oza kulwenza. Isiqwenga ngasinye somxholo okanye unxibelelwano isitokhwe esithengelwe ikamva lakho. Njengoko ukhula kwintengiso yakho yomxholo, utyalomali luyakhula. Nyanga nganye, unesiqulatho esongezelelekileyo esisebenza egameni lakho ukwakha ukuthembana, igunya kunye nabaphulaphuli bakho okanye uluntu. Emva kwethutyana, uluntu ngokwalo luqala ukusebenza endaweni yakho luqhuba ukuthengisa ngakumbi.
Ukuthethelela utyalomali lwexesha elide kufuna izibalo eziqinileyo, nangona kunjalo, kwaye ii-Smart Insights zikwenzile oko. Khuphela ezabo Isikhokelo kunye netemplate yokwenza imeko yeshishini kutyalo-mali kwintengiso yedijithali indlela ethe kratya yobungakanani- kunye nendlela yokuphumelela kwiingxoxo ezingokweemvakalelo, nazo. Nazi izibalo ezixhasayo abazidibanise:
tags: UkuThengiswa kweMpahlautyalomali lokuthengisaulungiso lomxholo wentengisoizizathu zokuthengisa umxholo
Izicwangciso ze-imeyile zitshintsha njani